buranchikovyh परिवार पर्छ Comfrey, यो एक बारहमासी औषधीय बिरुवा हो। यो एक मीटर को एक लम्बाइ गर्न बढ्छ। यो पनि जाडो सहन्छ बढ्न undemanding, चिसो र mowing गर्न प्रतिरोधी छ। उहाँले decurrent पात द्वारा माथिल्लो तलाको पखेटा, tubercles hairs मा कठोर बैठक बाट कुनै न कुनै छ। पातहरु पनि कडा बरु ठूलो छ, ovalnolantsetnye, को डंठल गर्न संकुचित छन्।
Comfrey blooms गाढा रातो वा बैजनी drooping फूल, inflorescence मा संकलित छन् जो। को गर्मी भर लामो फूल समय। फल - पागल को रूप, प्रत्येक फूल मा चार मा।
Comfrey moistened माटो रुचि, शायद जंगल र पहाडी भू-भाग मा, reservoirs, oxbow नदी, भिजेको Meadows को बैंकहरू साथ बढ्छ। यसको प्राकृतिक फारममा यो काकेशस, को अल्पाइन क्षेत्र को तलहटी मा बढ्छ। यो पार्क र उद्यान यो एक Ornamental बोट रूपमा उब्जाउ गरिन्छ।
शरद ऋतु वा प्रारम्भिक वसन्त मा dug छन् बिरुवाहरु को जरा सङ्कलन को औषधीय उद्देश्यका लागि। र केवल सुकेको जरा र rhizomes वेवास्ता प्रयोग गर्नुहोस्। जरा कागज पातलो पत्र संग लाइन ट्रे मा फैलियो। तपाईं पनि एक मा मुद्दा र सुक्खा मा strung जरा खुली सक्नुहुन्छ limbo। राम्रो हावा पहुँच एक कोठा मा सुकेको। यस तयार-सुकेको तिनीहरूले गठन जरा prodolnomorschinistye तिनीहरूले whitish 15 सेमी Splitability को। एक लम्बाइ प्रतिनिधित्व गर्छ।
Comfrey gallic एसिड, लासा, शर्करा, समावेश टेन्निसको, स्टार्च, आवश्यक तेल, विषालु enantotoksin, रेजिन र अरूलाई। Overground भाग tsinoglossin comfrey, konsolidin र आफ्नो क्षय उत्पादनहरु comprises।
Comfrey, चिकित्सा प्रयोग
Comfrey alkaloids ठूलो खुराक मा विषाक्त को स्नायु प्रणाली को पक्षाघात कारण छन्। सारा बोट विषालु छ। ठूलो परिमाणमा घाँस जनावर खाने जब यो colic गराउँछ। निहित खकार र टेन्निसको कारण, बोट जरा, astringent emollient र enveloping प्रभाव छ। हामी यस बोट कुरा भने comfrey को मूल, चिकित्सा (सरकारी) मा आफ्नो आवेदन अब दुर्लभ छ। परम्परागत चिकित्सा एक को रूप मा, श्वसन प्रणाली, पखाला को रोगहरु मा प्रयोग hemostatic एजेन्ट। उच्च खुराक मा घाँस दबाव मा एक कमी छ, यो आंत्र को motility, uterine मांसपेशीमा, वृद्धि सास को shortness सक्छ। alantonin मा निहित Comfrey विरोधी ट्यूमर गतिविधि छ।
Peretorty ताजा वा सुकेको जरा वा सुंगुरको बोसो मा एक मलम रूपमा लिएको र हड्डी भंग, घाइते र sprains को क्षेत्रमा लागू धमाकेदार। thrombophlebitis यसलाई प्रयोग गर्नुहोस्।
एक स्नान मा comfrey एक decoction थप्दा छाला को रोगहरु व्यवहार गर्छन्। फेफडे र हड्डी को क्षयरोगका मह, दूध, कच्चा अन्डा वा फरक बोसो संग भित्र decoction लिन गर्दा।
कहिलेकाहीं को रोगहरु को लागि एक decoction लिएर पेट, अपच, anorexia, छाला र बल्न मा घाउ र trophic अल्सर, pustular दाना निको, वोदका को tincture rubbed। घाँस मा वर्तमान पदार्थ, रोगाणुरोधी, घाउ निको र सूथिंग प्रभाव छ। comfrey संग सुक्खा छाला मलम एक स्वस्थ दिन्छ।
comfrey देखि nanodiamonds उपयोग गरदै र शोरबा तयार को विधिहरू
विधि 1: राम्रो mush मा ताजा मूल, भूमि लिनुहोस्, सल्फर, rosin, सुंगुरको बोसो थप्नुहोस्। परिणामस्वरूप मिश्रण केही मिनेट लागि उसिनेर थियो। गर्मी देखि हटाएपछि, शांत र त्यसपछि कच्चा थप्न अनुमति अन्डा सेतो। यो सुंगुरको बोसो मा कीमा बनाएको मूल overcook गर्न सुन्दर र थप्न सम्भव पनि छ camphor। यी nanodiamonds उपयोग गरदै भंग, संयुक्त deformity rheumatism, छाला रोग लागि प्रयोग गरिन्छ।
विधि 2: सूक्ष्मता कटा वा सुक्खा मूल rastortogo एक चालीस ग्राम गर्न तातो दूध लीटर थपियो। मिश्रण ढक्कन अन्तर्गत धेरै कम गर्मी मा पाँच घण्टा evaporated थियो। तपाईं पनि मह एक वा दुई भागहरु संग comfrey मूल मिश्रण गर्न सक्नुहुन्छ। यो पेस्ट एक चम्मच धेरै पटक एक दिन उपभोग।
"Nexium": प्रयोगको लागि निर्देशन
दबाइ "Sertraline": प्रयोगको लागि निर्देशन, साइड इफेक्ट, डाक्टर समीक्षा
शान्त "Phenazepam": अधिमात्रा, साइड इफेक्ट
Bifiform - निर्देशन
Ginseng। चिकित्सा प्रयोग
BRDM-2: मिलाउने, प्रदर्शन, निर्माता, फोटो। बख्तरबंद फौजको जाचबुभ्क र गस्ती वाहन
कार बजार नवीनता: आफूलाई एक वैन ठान्नुहुन्छ गर्ने मोटरसाइकल,
को जडीबुटी सबै thyme: उपयोगी गुण र contraindications
मानिसहरू आफ्नो armpits दाढी लागि यो आवश्यक छ कि छैन भनेर? शेविंग armpits विरुद्ध तर्क
के तपाईं "हतियार व्याख्यात्मक लागि" के मतलब र तपाईं यस वाक्यांश सुन्न यदि कसरी व्यवहार गर्ने?
कसरी घर वा निजी घर मा दर्ता
शान्त बे, सखलिन टापु: फोटो र समीक्षा
एक दिन तपाईं कत्तिको एक avocado खान सक्नुहुन्छ? अभोकाडो: क्यालोरी, भिटामिन, उपयोगी गुण र contraindications
सबै भन्दा राम्रो analogy "levomekol": वर्णन, निर्देशन
कसरी यसलाई भारत छ जो प्रायद्वीप, भनिन्छ? आधुनिक भारत: सुविधाहरू, नक्सा
उपयोगी गुण, आवेदन, सङ्केत गर्छ र contraindications को विवरण: तीन च्यादर लगाएको हेर्न
Proteus सिंड्रोम: लक्षण र उपचार तरिका